DEG DEG Agaasimihii uu magacaabay Farmaajo oo Hada Madaxtooyada la wareegay iyo Warar Sheegaya in - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta DEG DEG Agaasimihii uu magacaabay Farmaajo oo Hada Madaxtooyada la wareegay iyo...
DEG DEG Agaasimihii uu magacaabay Farmaajo oo Hada Madaxtooyada la wareegay iyo Warar Sheegaya in
Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali oo dhawaan uu Farmaajo u magacaabay xilkaas ayaa munaasabad ku qabsoontay Villa Somalia, waxa uu xilka kala wareegay ku-simihii Agaasimaha Guud ahna Ku-xigeenka Agaasimaha Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed.
Cabdisaciid ayaa horey u ahaa la-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo, hase yeeshee waxaa lagu beddelay Fahad Yaasiin, oo ra’iisul wasaare Rooble oo ka joojiyey shaqadii agaasimaha NISA, inkastoo markii dambe uu sheegay inuu is-casilay.
Agaasime Cabdisaciid Muuse Cali ayaa soo bandhigay qorsheyaasha ku aaddan horumarinta howlaha hortabinta u leh Madaxtooyada, isaga oo uga mahad-celiyey Agaasime Cabdinuur Maxamed Axmed shaqadii wanaagsanayd ee uu ka soo qabtay Madaxtooyada muddadii uu hayey xilka Ku-simaha Agaasimaha Guud.
Dhankiisa, Agaasime Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa ka codsaday dhammaan howl-wadeennada Madaxtooyada iyo hay’adaha kale ee Dowladda in ay ku garab istaagaan Agaasimaha cusub ee Madaxtooyada gudashada masuuliyadda loo igmaday, waxa uuna xusay dib u habeynta ballaaran ee uu ku sameeyey hannaanka shaqo iyo shaqaale ee Madaxtooyada.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Mudane Xasan Macallin Khaliif oo munaasabadda ka qayb galay ayaa u rajeeyey agaasimaha cusub in Alle u fududeeyo gudashada mas’uuliyadda Qaran ee loo igmaday, isaga oo kula dardaarmay ka miro-dhalinta qorsheyaasha shaqo ee Madaxtoyada iyo kobcinta tayada shaqaalaha.
Munaasabaddan ay xilka kula kala wareegayeen Labada Agaasime waxaa goob joog ka ahaa La-taliyeyaasha Farmaajo, Agaasime Waaxeedyada Madaxtooyada iyo hawl-wadeenno ka tirsan Xafiiska.